Забур 10 CARS - Nnwom 10 ASCB
1Adɛn enti, Ao Awurade, na wogyina akyirikyiri saa?
Adɛn enti na wode wo ho ahinta wɔ amanehunu mmerɛ mu yi?
2Ɔmumuyɛfoɔ de ahantan taataa mmɔborɔfoɔ,
wɔn a mfidie a wɔasunsum yi wɔn.
3Ɔde deɛ nʼakoma hwehwɛ hoahoa ne ho;
ɔhyira ɔdifodepɛfoɔ, na ɔyi Awurade ahi.
4Ahantan enti, omumuyɛfoɔ nhwehwɛ Awurade;
na Onyankopɔn nni ne nsusuiɛ nyinaa mu.
5Nʼakwan nyinaa mu, ɔdi yie;
ɔma ne ho so, na wo mmara mfa ne ho;
na ɔdi nʼatamfoɔ nyinaa ho fɛw.
6Ɔka kyerɛ ne ho sɛ: “Biribiara mma me nhinhim;
mʼani bɛgye daa, na merenkɔ amanehunu mu da.”
7Nnome, atorɔ ne ahunahuna ahyɛ nʼanom ma;
Ɔhaw ne mmusuo hyɛ ne tɛkrɛma ase.
8Ɔtɛ wɔ nkuraase;
ɔfiri atɛeɛ kum deɛ ɔnnim hwee,
na ɔhwɛ wɔn a ɔrepɛ wɔn akum wɔn.
9Ɔte sɛ gyata a wahinta;
ɔtɛ sɛ ɔbɛkyere mmɔborɔni;
ɔkyere wɔn twe wɔn ase de wɔn kɔ ne bɔn mu.
10Ɔdwerɛ wɔn a ɔkyere wɔn no ma wɔtɔ baha;
na ɔde nʼahoɔden ka wɔn hyɛ.
11Ɔka kyerɛ ne ho sɛ, “Onyankopɔn werɛ afi;
wayi nʼani afiri so na ɔnhunu.”
12Sɔre, Awurade! Ma wo nsa so, Ao Onyankopɔn.
Mma wo werɛ mfiri wɔn a wɔnni aboafoɔ.
13Adɛn enti na omumuyɛfoɔ yi Onyankopɔn ahi?
Adɛn enti na ɔka kyerɛ ne ho sɛ,
“Ɔremfrɛ me akontabuo so?”
14Nanso wo, Ao Onyankopɔn, wohunu amanehunu ne ɔhaw;
na wayɛ wʼadwene sɛ wobɛhwɛ.
Mmɔborɔni de ne ho ma wo;
wo na woyɛ awisiaa ɔboafoɔ.
15Bubu omumuyɛfoɔ ne ɔbɔnefoɔ aprɛ;
frɛ no na ɔmmɛbu nʼamumuyɛ ho nkontaa,
amumuyɛ a anka wɔrenhunu no.
16Awurade yɛ ɔhene daa nyinaa;
amanaman no bɛyera nʼasase so.
17Ao Awurade, wotie awiɛmfoɔ adesrɛ;
wohyɛ wɔn nkuran, na wotie wɔn sufrɛ,
18na wodi ma awisiaa ne deɛ wɔhyɛ ne soɔ
sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔdasani a ɔfiri asase so
renhunahuna obiara bio.
ASCB : Nnwom 10